के हो आत्महत्या दुरुत्साहन् ? अधिवक्ता भन्छन् रवि लामिछाने पहिलो व्याक्ति (भिडियो) – Naya Pusta
के हो आत्महत्या दुरुत्साहन् ? अधिवक्ता भन्छन् रवि लामिछाने पहिलो व्याक्ति (भिडियो)
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र ५, बिहीबार २१:२० [post-views]
पोखरा । गतवर्ष भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले गरेको नयाँ व्यवस्थामध्ये एउटा हो, आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्नेलाई गरिने दण्डसजाय ।
उक्त संहिताको दफा १८५ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ अधिबक्ता सुरेन्द्र थापा मगर भन्छन यस्तो कसुर गर्नेलाई ‘५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने व्यवस्था छ।
छिमेकी मुलुक भारतलगायत देशमा यस्तो व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ । नेपालमा भने यस्तो कानुन भर्खरभर्खरै बनेको र यसबारे सर्वोच्चले कुनै नजिर पनि प्रतिपादन गरिसकेको छैन । थापा भन्छन त्यसैले कस्ता घटनालाई आत्महत्याको दुरुत्साहन मान्ने र कस्तालाई नमान्ने भन्ने द्विविधा छ।
सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्यामा दुरुत्साहन आरोपमा टीभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि यसबारे अझ बढी चासो बढेको छ। हामीले आत्महत्या दुरुत्साहन भनेको केहो भन्ने बारे बार यसोसियसन नेपालका उपाध्यक्ष्य सुरेन्द्र थापा मगरसंग कुरा गरेका छौँ।
कसरी हुन्छ हृदयघात ? यस्ता छन लक्षण र बच्ने उपाय